Actinidia ssp bụ a genus nke Actinidia Lindl, nke nwere 66 ụdị kiwifruit na 62 umu ke China. "Pujiang kiwi" by obodo egosi edenyere, nke bụ a kasị Pujiang ịrịba ama. Pujiang County, Sichuan Province, emi odude ke ohere 30 degrees ugwu ohere, bụ ụwa ghọtara kiwi kasị mma akuku ebe, magburu onwe ya ebe obibi na ọnọdụ, ndị ọgaranya iche iche nke ego, ahịa isi dị mma. Sichuan Province, dị ka otu onye nke anụ kiwi nkesa emmepe na China, bụ t ...
Actinidia ssp bụ a genus nke Actinidia Lindl, nke nwere 66 ụdị kiwifruit na 62 umu ke China. "Pujiang kiwi" by obodo egosi edenyere, nke bụ a kasị Pujiang ịrịba ama. Pujiang County, Sichuan Province, emi odude ke ohere 30 degrees ugwu ohere, bụ ụwa ghọtara kiwi kasị mma akuku ebe, magburu onwe ya ebe obibi na ọnọdụ, ndị ọgaranya iche iche nke ego, ahịa isi dị mma.
Sichuan Province, dị ka otu onye nke anụ kiwi nkesa emmepe na China, bụ ihe ndị kasị ukwuu ógbè nke ọhịa kiwi germplasm onwunwe na mee. The results gosiri na e nwere ndị na 25 umu (gụnyere variants na variants) nke Actinidia na Sichuan Province.
Pujiang County dị na ndịda ọdịda anyanwụ onu nke Chengdu Plain, n'etiti 103 degrees ọwụwa anyanwụ lonjituudu 103 nkeji 41 degrees 41 nkeji, ohere 30 degrees 5 nkeji 30 degrees 21 nkeji. Ihe ruo 37 km ogologo, n'ebe ugwu na n'ebe ndịda na widest 27,5 km, na a ngụkọta nke ebe 582,86 square kilomita. Na 2005, na-asị bi ruo 2575 ndị ​​mmadụ, 22,37 nde mu nke arable ala. Pujiang County, nkezi afọ okpomọkụ nke 16,3 ℃, Pingba, ugwu nta, ugwu na teren, okpomọkụ nwayọọ nwayọọ shortened, na oyi na-eji nwayọọ nwayọọ karị; ala esịmde nke abụọ osimiri Shou'an ebe ndị fọdụrụ n'ezinụlọ okpomọkụ ebe, Changqiu ugwu ebe ndị fọdụrụ n'ezinụlọ oyi. The nkezi okpomọkụ bụ n'etiti 17,9 na 18.2 ℃, nke dị elu karịa kwa afọ nkezi okpomọkụ nke 1.6 ~ 1.9 ℃. The nkezi okpomọkụ bụ n'etiti 17,9 na 18.2 ℃, na-enwe kwa afọ nkezi okpomọkụ bụ 1.6 ~ 1.9 ℃. Kwa afọ nkezi, kwa ụbọchị mmiri ozuzo nke 85%, ma e wezụga n'ihi na kasị ala na May 79%, ndị fọdụrụ ọnwa nwere ihe karịrị 80%, tumadi n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ na n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ ifufe.
Kiwi nwere nnukwu ekwukwa n'akwụkwọ uru, vitamin C ọdịnaya dị elu, a maara dị ka "eze nke mkpụrụ", akụ na ụba uru bụ oké elu. On October 27, 2010, International Kiwi ọnụ ọnụ Summit ẹkenịmde ke Pujiang County, Chengdu. The oghere ememe, "Pujiang kiwi" eze nwetara mba obodo egosi nchedo ngwaahịa na. Pujiang County bụ otu n'ime ụwa atọ kasị odo kiwi kiwi ọkpọ, Pujiang County, nwayọọ idụhe, ukwuu oké mmiri ozuzo, tụụrụ ala, a ghọtara dị ka ndị kasị mma kwesịrị ekwesị kiwifruit cultivation ebe, bụ a mba kiwi etozu ngosipụta ebe, mbupụ kiwi àgwà na nchekwa ngosipụta ebe, bụ ụwa atọ odo kiwi kiwifruit cultivation nke otu nke ụwa obere red, odo, green "atọ-agba ọnụ" kiwi malite. 2010 "Pujiang kiwi" na mkpụrụ osisi udi mara mma, ọgaranya okpukpo, ụtọ na utoojoo uto, pụrụ iche flavor, potassium-ọgaranya e ji mara na-mara dị ka mba obodo egosi nchedo ngwaahịa, na 2011 ọma aha obodo-egosi asambodo akara. Pujiang nwoke atọ Pujiang kiwi nwoke atọ, na-ezo aka Pujiang kiwi mkpụrụ-acha odo odo mkpụrụ, green mkpụrụ, red mkpụrụ, ha bụ ndị bara ọgaranya Victoria C, mara dị ka "Eze nke Victoria C".
"Pujiang nlereanya" bụ Pujiang na-ewusi ike na àgwà na nchekwa nke ugbo ngwaahịa nchekwa na-elekọta, na-akwalite mmepụta mmepe, kwado mmepe nke otutu omume nlereanya, bụ Nchikota na-asị ọnọdụ dị na obodo ọnọdụ, ọrụ siri ike na gbara ọkpụrụkpụ gosiri na . Pujiang si otutu omume e pụta ìhè. Government-ada, departmental linkage, kiwi "ire nchekwa" iji nweta zuru-elekọta.
The oruru nke na-arụ ọrụ nkwalite otu, lekwasịrị ọrụ usoro na-aza ajụjụ usoro, ego nchedo usoro, n'ụzọ dị irè mezie kiwi osisi cultivation, nhazi, mgbasa, oriri na ugbo ahịa iji, iji nweta usoro iwu ọrụ n'ezinụlọ nkịtị management na isi iyi management agbanwe The Leading ka mba edinam, kiwi "ọkọlọtọ mmepụta" iji nweta a n'otu ijeụkwụ.
Ịdabere na uru nke Lenovo si usoro nkesa, na nguzobe nke "n'otu ika ikike, n'otu ugbo ụkpụrụ, n'otu ugbo esenyịn, n'otu dum ngwaahịa akara, n'otu underwriting, n'otu aka ego" "isii n'otu" yinye akuku mode, nye zuru play na asị eduga ụlọ ọrụ, mkpakọrịta, ọrụ nke nzukọ, n'ụzọ dị irè huu Pujiang kiwi pụrụ iche àgwà na àgwà na nchekwa.
Market na-edebere, ika na-ada, kiwi "atọ nke linkage" iji nweta mmepụta na sales booming. Pujiang site mmejuputa "mmepụta ụkpụrụ, ngwaahịa nwere ihe ịrịba ama, àgwà ule, asambodo usoro, ahịa na-elekọta," dum usoro nke tozuru etozu mmepụta, kiwi mkpụrụ ọnụego, magburu onwe ya mkpụrụ ọnụego nke 95%, 90% ma ọ bụ karịa, site na mba quality nnyocha General Administration "mbupụ ngosipụta isi" nnabata, kiwi mkpụrụ rere ka Europe, Russia, ihe karịrị 20 mba na mpaghara. Na 2014, na-asị kiwi ngụkọta mmepụta nke 39,78 nde n'arọ, onye na-abawanye nke 964 nde kilogram, na mmepụta uru nke 478,2 nde yuan, onye na-abawanye nke 28,62 nde yuan; Industrial agglomeration, welie arụmọrụ, kiwi "mgbe ala n'ime gold."
Pujiang wuru ibu na nke kacha elu kiwifruit nkwakọ na nchekwa center, bụ na adị ndị na-ewu ebe ihe karịrị 300 acres nke kiwi mkpụrụ N'ogbe ahịa; wuru kiwi ọhụrụ ikuku oyi n'ọbá akwụkwọ 43, ndị ngụkọta ikike 40,000 tọn, n'ụzọ dị irè mezie kiwi mkpụrụ ahịa Tụkwasịnụ; iwebata ahịa na nhazi ụlọ ọrụ ihe karịrị 20, Pujiang kiwi ulo oru ụyọkọ na-eji nwayọọ nwayọọ kpụrụ.
Na-adịbeghị anya, Pujiang County gburugburu "iru mba ụkpụrụ nke organic agriculture isi" ihe mgbaru ọsọ, ndị mbụ na mba na-akwalite n'ozuzu ewu organic agriculture asị na "ewu ise usoro" dị ka a ihe itunanya, ike na-akwalite elu-edu kiwi, tii, citrus, ịzụlite na mụbaa na-eduga ụlọ ọrụ, nzukọ, ugbo ezinụlọ "atọ isi", leveraging iche, àgwà, ika "atọ ngwaahịa aka", nti mmezu nke ugbo ụlọ ọrụ na nọmba nke mgbasa aka àgwà nke mgbanwe na upgrading, nke a ọhụrụ pụrụ iche Pujiang e ji mara ụzọ nke oge a agriculture ọhụrụ na mmepe mgbanwe.
Osote: Green Heart Kiwi Mkpụrụ
China Kiwi Mkpụrụ
Fresh Kiwi Mkpụrụ
Jin Yan Kiwifruit ekspootu
Kiwi n'ihi Sale
Kiwi Mkpụrụ Price
Price Of Kiwi Mkpụrụ
ebe ịzụta Kiwi
Green Heart Kiwi Mkpụrụ